खोप अभियान सुरु गरेको ६ महिना नबित्दै इजरायल विश्वकै पहिलो ‘मास्क फ्रि’ देश घोषणा | Naya News Nepal
Home अन्तर्राष्ट्रिय खोप अभियान सुरु गरेको ६ महिना नबित्दै इजरायल विश्वकै पहिलो ‘मास्क फ्रि’...
खोप अभियान सुरु गरेको ६ महिना नबित्दै इजरायल विश्वकै पहिलो ‘मास्क फ्रि’ देश घोषणा
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार १०:४५
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार काठमाडौं।
खोप अभियान सुरु गरेको ६ महिना पनि पूरा नहुँदै इजरायलले आफूलाई विश्वकै पहिलो मास्क फ्रि देश घोषणा गरेको छ । बाहिर मास्क लगाउन अनिवार्य प्रावधान यसअघि नै हटाइसकेको इजरायलले यही जून १५ देखि बन्द ठाउँमा अर्थात इनडोरमा पनि मास्क लगाउन नपर्ने व्यवस्था गर्दैछ । यससँगै इजरायल विश्वकै पहिलो मास्क फ्रि देश हुनेछ ।
इजरायलका स्वासथ्य मन्त्री युलि एडलस्टिनले १५ जूनदेखि बन्द स्थानमा पनि मास्क लगाउन नपर्ने घोषणा गरेको टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ । इजरायलले १९ डिसेम्बरमा खोप अभियान सुरु गरेको थियो । इजरायलमा पहिलो खोप प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले लगाएका थिए । इजरायलको खोप अभियान सुरु भएको जून १९ मा ६ महिना पूरा हुँदैछ । तर, ६ महिना पुग्नु ४ दिन अगावै इजरायलले आफूलाई मास्क फ्रि देश घोषणा गर्दैछ ।
स्वास्थ्य मन्त्री एडलस्टिनले भने ‘यदि अगाडि संक्रमण धेरै बढेन भने प्रतिबन्ध पूण रुपले हटाइनेछन् ।’ इजरायलमा भीडमा रोक र आपसी दूरी जस्ता धेरैजसो प्रतिबन्ध १ जूनमै हटाइएका थिए । विदेश यात्रासँग सम्बन्धित अधिकांश प्रतिशन्ध भने अझै हटाइएका छैनन् । ९ देशहरुको यात्रामा अहिले पनि प्रतिबन्ध छ । यी देशबाट आउने यात्रीहरुको लागि क्वारेन्टाइनको नियम छ । उनीहरुको कोरोना परीक्षण पनि गरिन्छ ।
अर्कोतर्फ यहाँ आइतबारदेखि १२ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका लागि पनि खोप अभियान सुरु भएको छ । इजरायलमा सर्वसाधारणको लागि खोप अभियान २० डिसेम्बरबाट सुरु भएको थियो । पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र ६५ वर्षभन्दा अधिक उमेरका नागरिकलाई खोप लगाइएको थियो । त्यसपछि खोपका लागि उमेरको सीमा कम गर्दै खोप अभियान जारी छ ।
Previous articleगिजाबाट रगत बग्ने समस्या छ ? अपनाउनुहोस् यस्तो उपायहरु
Next articleपारस शाहकि छोरी पूर्णिकाले भिडियोमा भनिन् : मेरा बाउ निश्चल छन्
अमेरिकामा १२ तले भवन भत्किँदा ‘९९ जना बेपत्ता’
महामारी को समयमा काम नपाउदा भारतमा ‘अभिनेत्री बने यौनकर्मी’!
गायक हेमन्त राणाले गरे विवाह
महामारीको कारण धरासाही भएको चलचित्र उद्योग, पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याउन माग
मार्स रोवर पर्सिवियरेन्सले सय दिनभित्र लिएको मंगल ग्रह को फोटोहरु…
बन मन्त्रि आले भन्छन – मलाइ थाहै नदि सिलिण्डरमा मेरो स्टिकर टाँसेछन्